Idi Onye nrụpụta Gantry kacha mma na ụlọ ọrụ |Tongli
Gantry manipulator ọrụs n'obosara nso, site nakpaliri sitenduụgbọ okporo ígwè, it nwere ikeọrụ in ọtụtụ ọdụ ụgbọ mmiri.Mgbe ị na-eje ozi otutuịkụ ọkpọebe obibi ma ọ bụ ebe nhazi, yana ụlọ ọrụ mgbakọ ụgbọ ala, it nwere ike ibelata ike ọrụ ma belata mmerụ ahụ ndị ọrụ.
Dabere n'akụkụ aka nri X, Y, Z usoro nhazi atọ, gantry manipulator bụ akụrụngwa nrụpụta akpaka iji dozie ọdụ ọrụ nke workpiece ma ọ bụ bugharịa workpiece.
Gantry manipulator bụ ụdị onye na-emegharị ihe nke nwere mkpọdo kwụgidere na ala nke okporo ụzọ nduzi, nke edobere na etiti gantry.Ọ na-arụ ọrụ site n'ọdụ ụgbọ okporo ígwè na ụgbọ ala na-amị amị.
Usoro ọrụ dị ukwuu, nwere ike ijere ọtụtụ ọdụ ụgbọ mmiri, nwee ike mezue nbudata na nbudata nke ọtụtụ ngwaọrụ igwe, yana ahịrị mgbakọ.
Ụdị akụrụngwa TLJXS-LMJ-50 TLJXS-LMJ-100 TLJXS-LMJ-200 TLJXS-LMJ-300
Radius L5 na-arụ ọrụ 2500mm 2500mm 2500mm 2500mm
Ibu nke akụrụngwa 370kg 450kg 510kg Emebere nkeonwe
Gantry manipulator, onye na-emegharị ahụ na-anabata usoro ụgbọ okporo ígwè akụkụ anọ, nke nwere ike ibu ibu dị arọ.A na-eji ya eme ihe n'ọhịa nke CNC akpaka nbudata na nbudata, njikwa na palletizing.Dị ka usoro ịntanetị si dị, a na-ekewa ya n'ụdị dị iche iche dị ka onye na-ahụ maka gantry gantry, dual-line gantry manipulator, na multi-line gantry manipulator;A na-ekewa ndị na-arụ ọrụ gantry ka ọ bụrụ ndị na-arụ ọrụ gantry dị ọkụ na ndị na-arụ ọrụ gantry dị arọ dị ka ibu dị arọ si dị.Kedu ụdị gantry manpulator ị ga-ahọrọ dabere na teknụzụ na oge nhazi ngwaahịa, ọdịdị na ịdị arọ nke ngwaahịa, yana mkpa ndị ọrụ.
Isi njirimara ya bụ
1. ike practicability (obere akara ukwu na obere nrụnye mgbochi)
Enwere ike ịhazi manipulator gantry n'efu na ahịrị mmepụta ụlọ ọrụ, ọ na-ewekwa obere mpaghara.Enwere ike ịtọ ya na oghere dị warara dịka mkpa mmepụta ihe n'ezie na-emetụtaghị ọrụ ziri ezi.Ọzọkwa, ụdị nhazi a nwere ike ịhazi ya nke ọma ma dabara adaba maka mmepụta onye ọrụ, nke bụ ọrụ nke ndị na-emegharị omenala na-apụghị ịrụzu.
2. Dị mfe iji rụọ ọrụ na iji, dị mfe ịnọgide na-enwe (dị nnọọ tọọ ebe ọ bụla na-arụ ọrụ)
Ọrụ nke ụdị gantry manipulator dị nnọọ mfe, a pụkwara iji ya mee ihe maka mmepụta nchebe ọbụna n'amaghị ihe ọmụma ọrụ.Na mmezi n'ọdịnihu, ọ dị mma ịkwasa, nhazi modular na nhazi dị mfe.
Nke gara aga: Onye na-ahụ maka eriri waya
Osote: Onye na-eme ihe na ikuku ikuku